मेरो वेब लेआउट परिवर्तन गर्नाले मेरो SERP रैंकिंगलाई असर गर्छ? Semalt जवाफ दिन्छ
अब जब यो SERP को लागी आउँछ, धेरै वेबसाइटहरु सावधान छन्। यो किनभने यो मात्र एक परिणाम पृष्ठ हो, यो जमीन मा आफ्नो वेबसाइट चलाउन पर्याप्त भन्दा बढी हो। यसै कारण जब धेरै वेबसाइटहरूसँग एउटा सुराग छ कि त्यस्तै कार्यले उनीहरूको SERP प्रदर्शनमा असर पार्दछ; तिनीहरूले यसलाई गम्भीरताका साथ लिन्छन्।
यद्यपि, हामी यहाँ सल्लाहहरू प्रदान गर्न आएका छौं तपाईंले सही निर्णयहरू लिन आवश्यक छ। यस लेखमा हामी छलफल गर्नेछौं तपाईंको लेआउटले तपाईंको SERP प्रदर्शनलाई कसरी असर गर्छ र तपाईं कसरी आफ्नो वेबसाइटलाई फाइदाजनक पक्षमा राख्न सक्नुहुन्छ।
एक परिवर्तन हुँदै गरेको ब्रान्ड छवि, पुन: निर्माण, वा वृद्धिको साथ, धेरै वेबसाइटहरूले लगभग हरेक बर्ष आफ्नो वेबसाइट लेआउट परिवर्तन गर्दछ। दर्शकहरूसँग सम्पर्कमा रहनको लागि वेबसाइटहरूले उनीहरूको "समकालीन" उपस्थिति कायम राख्न केही परिवर्तनहरू गर्नुपर्नेछ। अब यी सबै तपाइँको वेबसाइटलाई सुधार गर्ने उत्तम तरिकाहरू हुन्, र यो सानो स्तरमा गरेको खण्डमा उत्तम छ। सानो थोपा, याद छ।
जहाँसम्म, केहि वेबसाइटहरूले पूर्ण-स्तर परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्छन्। वेब प्रबन्धकहरूले रूपरेखाको साथ साथै साइटको सामग्री परिवर्तन गर्दछ। यो एक सदमेको रूपमा आउन सक्छ, तर तपाईं त्यो पाउँदा चकित हुनुहुनेछ धेरै ग्राहकहरु Semalt आउँछन् प्रदर्शनमा आएको गिरावटको बारेमा गुनासो छ, र जब हामी निरीक्षण गर्छौं, तब हामीले पत्ता लगायौं कि धेरै पहिले नै सम्पूर्ण साइट खोसियो र पुनः बनाइएको थियो।
जब यो गर्न, प्राय जसो वेबसाइटहरूले महसुस गर्न असफल हुन्छन् कि तिनीहरूले उनीहरूको एसईओ प्रयासहरू र साइटले यस अघि गरेको गतिलाई नष्ट गर्दछ।
वेबसाइट लेआउट के हो?
सरल शब्दहरुमा, यो एक वेबसाइट को कंकाल हो। योसँग कुनै वेबसाइट बनाउन वा मार्न गर्ने शक्ति छ। वेबसाइट लेआउटहरू ढाँचा हुन् वा, हामीले भनेझैं, कंकाल जसले वेबसाइटको संरचना परिभाषित गर्दछ। लेआउट के हो सामग्री सामग्री र वेबपेज भित्र नेभिगेसन को एक स्पष्ट मार्ग प्रदान गर्दछ। यो एक वेबसाइट मा महत्वपूर्ण तत्व को स्थिति को लागी जिम्मेवार छ।
गुगलले साइटको सजावट परिवर्तन गर्ने बारे के भन्छ?
गुगलले सतर्क गराएको छ कि पृष्ठको लेआउट अपडेट गर्नाले त्यो पृष्ठको SERP रैंकिंगलाई असर गर्न सक्छ। यो प्रभाव अझै पनि लिने सम्भावना छ जबकि यूआरएल र सामग्री उही रहन्छ। वेबसाइटको लेआउट परिवर्तन गर्ने र रैंकिंगलाई असर गर्ने सम्बन्धमा जोन मुलरमा एक प्रश्न राखिएको थियो। ढिलाइ वा अस्पष्टता बिना, उनले भने कि हो, यस्तो परिवर्तन एसईओ रैंकिंगमा बाध्य छ।
यस प्रतिक्रियाको बारेमा अर्को अचम्मको तथ्य यो हो कि साइटको सामग्री र URL संरचना कायम छ। जे होस्, SERP प्रदर्शन अझै पनी प्रभावित हुन सक्छ। मुलरको जवाफमा, उनले वर्णन गरे कि वेब डिजाईन रूपरेखा परिवर्तन गर्दा खोजी रँकिंगमा असर पर्न सक्छ जुन वेब डिजाइनरहरूले पनि ध्यान दिनुपर्दछ। परिवर्तनहरू वेबसाइटमा कसरी प्रभाव पार्छ भनेर बुझ्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ कुनै परिवर्तनहरू हुनु अघि।
उनले अझ स्पष्ट पार्दछन् कि रूपान्तरण परिवर्तन गर्ने वा अद्यावधिक गर्दा तपाईले पृष्ठहरूमा कसरी शिर्षकहरू ठीकसँग प्रयोग गर्ने, आन्तरिक लि correctly्क कसरी सही ढ correctly्गले बनाउने, र लेखका लागि प्रस context्ग कसरी प्रदान गर्ने भनेर थाहा पाउनुहुनेछ। जब यी सबै कारकहरू एक एसईओ माइक्रोस्कोप मुनि राखिन्छ, दर्शकहरूले देख्न सक्छन् कि यी वस्तुहरूले SEOलाई कसरी असर गर्न सक्छ।
कुनै श doubt्का छैन, तपाईंको रूपरेखालाई अपडेटको आवश्यक पर्दछ। एसईओ मैत्री लेआउटको साथ वेबसाइटहरूले पनि सीएसएस अद्यावधिक गर्न र व्यक्तिगत HTML तत्वहरू कसरी स्टाइल र प्रयोग गरिएको छ भनेर अनुगमन गर्न आवश्यक हुन्छ। उदाहरण को लागी, वेब टेम्प्लेटहरू भेट्टाउन गाह्रो छैन जुन साइडबार नेभिगेसन एलिमेन्टहरू स्टाइल गर्न हेडि element्ग एलिमेन्ट प्रयोग गर्दछ।
त्यसोभए यसले हाम्रो ध्यान एक साधारण सत्यमा ल्याउँदछ, तपाईंको वेब लेआउट परिवर्तन वा अद्यावधिक गर्न सधैं प्रकोपको लागि एक विधि होईन। यो राम्रो चीज वा खराब हुन सक्छ। त्यसोभए यो उत्तम हुन्छ यदि तपाईलाई लेआउट परिवर्तन गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्दा लाज नमान्नुहोस्। यसको सट्टामा तपाईले व्यावसायिक मूल्यांकन खोज्नु पर्छ। यी परिवर्तनहरू गर्दा, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं डबल हुनुहुन्छ र, यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, ट्रिपल जाँच गर्नुहोस् कि अपग्रेडहरू के अपग्रेडहरू कार्यान्वयन भइरहेको छ सुनिश्चित गर्न सबै ठीकठाक गरिएको छ।
हो, हामी बुझ्दछौं, एक वेब लेआउट अपडेट गर्न डरावना हुन सक्छ। यो ती चीजहरू मध्ये एक हो जहाँ गल्तीले तपाईंलाई मूल्य तिर्न सक्छ। हामीले यो धेरै चोटि गरिसकेका छौं, र हामी भन्न सक्छौं हाम्रो पेशेवरहरू यसलाई कसरी सही बनाउने हो जान्दछन्। यसैले हामी उनीहरूलाई पेशेवर भन्छौं।
किन तपाईं पुनः डिजाइनको समयमा तपाईंको वेबसाइटलाई तोड्नबाट जोगिनुहुन्छ
त्यहाँ धेरै त्रुटिहरू SEO ह्यान्डल गर्दा छन्। यो किनभने खोज अप्टिमाइजेसनहरू सयौं तत्वहरूद्वारा प्रभावित छन्। अर्कोतर्फ, ब्याकलिks्कहरू अधिक एसईओ पोइन्टहरू स्कोर गर्न उत्तम तरिका हो।
गुगल र अन्य खोज इञ्जिनहरूले यी लिंकहरूलाई खोजी ईन्जिनको बिहानदेखि नै मतको रूपमा लिन्छन्। गुणवत्ता, मात्रा, र यी लिंकहरूको विविधता SERP मा उच्च स्कोर गर्न पर्याप्त प्रभावको साथ एक वेबसाइट प्रदान गर्दछ।
आन्तरिक रूपमा, लि also्कहरू पनि अवस्थित हुन सक्छन्, र यद्यपि तिनीहरू ब्याकलिks्कहरू जत्तिकै अधिकार राख्दैनन्, तिनीहरू एसईओमा पनि धेरै उपयोगी उपकरणहरू हुन्। जबकि तिनीहरूले बाहिरी विश्वमा धेरै गर्दैनन्, यी लिंकहरू उत्तम उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्नका लागि महत्वपूर्ण हो।
तपाईं कसरी सोच हुनुहुन्छ? यहाँ हामी भन्न खोजेको कुरा हो।
२०११ मा, गुगलले गुगल पाण्डा जारी गर्‍यो। यो पहिलो उदाहरणहरू मध्ये एक हो जहाँ गुगलले क्रॉलिative र खोजी क्वेरीहरू बुझ्नेमा यसको गुणात्मक कारकहरूको पुष्टि गर्‍यो।
यहाँ पुग्न, तिनीहरूले सर्वेक्षण प्रश्नहरू जस्तै प्रयोग गरे
के तपाइँ यस वेबसाइटले प्रदान गर्ने जानकारीमा विश्वास गर्नुहुन्छ?
साइटका सामग्री पछाडि विशेषज्ञहरू छन्?
के तपाइँ यस वेबसाइटमा तपाइँको क्रेडिट कार्ड विवरण बुझाउन सक्नुहुन्छ?
यस वेबसाइटमा पृष्ठहरूमा स्पष्ट त्रुटिहरू छन्?
के यो वेबसाइट तपाइँलाई पुस्तकचिनो योग्यको रूपमा प्रहार गर्दछ?
यस वेबसाइटमा धेरै विज्ञापनहरू छन्?
के साइटबाट पृष्ठहरू प्रिन्टमा देखा पर्न सक्षम थिए?
गुगलले यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन विभिन्न प्रयोगकर्ताहरू पायो, यसैले वेबसाइटहरूलाई रेटिंग दिइयो।
त्यस पछि केहि वर्षहरू, गुगलले संकेतहरू जुन वेबसाइटहरू उत्कृष्ट थिए प्रयोगकर्ताहरूको व्यवहारको अध्ययन गर्न थाले। यस चरणमा, हामीले यो विचार सुरू गर्न थाल्यौं कि गुगलले उनीहरूको लिंकहरू र सामग्रीको लम्बाइको आधारमा साईट रैंकिंगमा रुचि राख्दैन तर वेबसाइटको समग्र अनुभव। परिणामको पहिलो पृष्ठमा पहिलो स्लटको लागि योग्य हुन, तिनीहरूलाई यो जान्नु आवश्यक छ कि तपाईंले प्रयोगकर्ताहरूलाई उत्तम अनुभव प्रदान गर्नुहुन्छ। यसको मतलब, राम्रो तपाईंको अनुभव, तपाईंको साइटको लागि अधिक पोइन्टहरू।
अब कल्पना गर्नुहोस् कि तपाइँको वेब लेआउट सुधार गर्दा, तपाइँ तपाइँको वेबसाइट मा सबै ध्यान दिएर राखिएको लिंक हानी गर्न को लागी। चिकनी, सिमलेस अनुभवको सट्टामा, अब तपाईंको साइटमा आगन्तुकहरूको मार्ग ट्रेल गर्ने भाँचिएको लिंकहरूसँग डिल प्रयोग गर्दछ। जब तपाइँ तपाइँको सजावट पुन: डिजाइन गर्नुहुन्छ, तपाइँ वेबसाइटको धेरै वास्तुकला परिवर्तन गर्नुहुन्छ।
जब गलत भयो, तपाईंको लेआउट परिवर्तन गर्दा तपाईंको हब पृष्ठहरूलाई हानी गर्दछ। यी ती हुन् जुन हामी पृष्ठहरूको "क्लस्टर" को रूपमा सन्दर्भ गर्दछौं जुन तपाईंको साइटमा एक अर्कामा सम्बन्धित छ। हब पृष्ठहरूले तपाइँको साइटमा बसोबास गर्ने समय बढाउँदैन, तर ती पृष्ठहरूमा छलफल गर्ने शीर्षकहरूमा तपाइँको अधिकार पनि बढाउँछन्।
त्यसबाट तपाईंसँग 4०4 त्रुटिहरू सुरू हुन्छ। यदि तपाइँसँग तपाइँको साइट मा केवल एक वा दुई छ, त यो कुनै ठूलो कुरा हो। जहाँसम्म, हामी यी मध्ये १० भन्न गरौं एक समस्या हुन्छ। तपाइँको वेबसाइट को उपयोग तब निराश हुन्छ, र प्रयोगकर्ताहरु लाई छोड्न को लागी विकल्प छैन।
वेबसाइटको सजावट कहिले पुन: डिजाइन गर्नुपर्दछ?
जब कोही अनलाइन जान्छ र खोजी क्वेरी इनपुट गर्दछ, तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो साइटमा आउनको लागि चाहनुहुन्छ। तर कल्पना गर्नुहोस् यदि तपाईं ट्राफिक गुमाउनुहुन्छ किनभने तपाईंको वेबसाइट एकदम गाह्रो छ, पढ्न गाह्रो छ, वा अव्यवसायिक देखिएको छ। निस्सन्देह तपाईं त्यो क्षण डराउनुहुनेछ।
यहाँ केहि लेआउट डिजाइन त्रुटिहरू छन् जुन तपाईले हेर्नु पर्छ
पप-अपहरू उत्कृष्ट छन्, तर ती पनि त्रुटि हुन सक्छन्। यो विशेष गरी पप-अपहरूको लागि हो जुन प्रयोगकर्ताहरूले तपाईंको सामग्री अवलोकन गर्न मौका पाउनु अघि आउँदछ। पप-अप विरलै प्रयोग हुनुपर्छ, र तपाईंले श्रोताहरू उनीहरूको जानकारी मागेर पप-अप प्रवाह गर्न सक्नु अघि विश्वास बढाउने प्रयास गर्नुहोस्।
२. वाच्य पदहरू
सहि फन्ट साइज र रंग प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। फन्ट र गरीब र color्ग योजना पढ्न हार्डको उपयोग गर्नमा गल्ती नगर्नुहोस्। इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू धेरै धैर्यता राख्दैनन् र तपाइँको वेबसाइटको खुलासा गर्न वरिपरि पर्दैनन्।
Lar ठूलो आवाज
यो साधारण होईन तर यो महत्त्वपूर्ण छ हामी यसलाई उल्लेख गर्छौं। एक भिडियो वा अडियो ट्र्याक प्रयोग गर्दा, तपाईंले यसलाई ध्वनिको साथ कहिले पनि स्वचालित रूपमा प्ले गर्न दिनुहुन्न। यदि तपाईं स्वचालित रूपमा खेल्नुपर्दछ, निश्चित गर्नुहोस् कि यो म्युट गरिएको छ।
Lar ठूला फाईलहरू
तपाईंको वेबपृष्ठमा धेरै ठूला फाईलहरू राख्नु भएको यसको लोडिंग गति धीमा गर्दछ। याद गर्नुहोस्, सबैजनासँग डाटाको ठूलो ब्यान्डविथमा पहुँच छैन, त्यसैले भारी छविहरूको भरिपूर्ण वेबसाइट भएकोले जीवन निराश बनाउँदछ। पर्खनु भन्दा, अपेक्षाकृत ढिलो ईन्टरनेट जडान भएका प्रयोगकर्ताहरूले वैकल्पिक रुचाउँनेछन्।
एक राम्रो वेबसाइट लेआउट एसईओ प्रदर्शन सुधार। वेबसाइटहरू सकेसम्म सजिलो तर सही सामग्री र अधिकको साथ खोजी इञ्जिनहरूले यसलाई मनपराउँदछन्। राम्रो लेआउट भएकोले महत्वपूर्ण जानकारी ठाउँहरू पत्ता लगाउन सजिलो पार्दछ। यसले सबैका लागि जानकारी धेरै छिटो र सजिलो बनाउँदछ। तपाइँको लेआउट के गर्ने के बारे मा छलफल गर्दा, नबिर्सनुहोस् Semalt तपाईंलाई सहि कल गर्न मद्दत गर्दछ। विशेषज्ञहरु र अनुभव को बर्ष संग, तपाईलाइ उत्तम सेवा र उपचार को ग्यारेन्टी गरिएको छ। तपाई केको लागि प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईंको वेबसाइटलाई आज सही पाठ्यक्रममा चलाउनुहोस्।